Sazy famonjàna dimy taona no arangarangan’ny manampahefana ao Hong Kong ho an’ireo izay manatrika ny fiaretantory fahatsiarovana ny Vonomoka tao Tiananmen · Global Voices teny Malagasy
Taona faharoa nandraràna ny fiaretantory ao Victoria Park rehefa 4 Jona
Voadika ny 31 Mey 2021 16:39 GMT
Afisy ho fahatsiarovana ny faha-32 taonan'ny 4 Jona. Sary avy amin'ny HK Alliance ho fanohanana ny Hetsika Fitiavan-tanindrazana ao Shina.
Taorian'ny fandraràn'ny polisy ao Hong Kong an'ilay fiaretantory andrehetana lahinjiro fanao isantaona ao amin'ny Victoria Park mba ho fahatsiarovana ireo nidiran-doza tamin'ny Vonomoka tao amin'ny Kianja Tiananmen ao Shina tamin'ny 1989, nampitandremin'ny Biraon'ny Fiarovana ireo mponina ao Hong-Kong tsy handray anjara amin'ilay fiaretantory atao amin'ny 4 Jona amin'ity taona ity, na ny fahatsiarovana avy lavitra hatao ny Alahady 30 May.
Nolazaina tao anaty fanambaràna iray navoaka tamin'ny 29 May fa:
Tsy nahazoana alàlana ireo fihaonana sy diabe mifandraika amin'izany. Tsy misy olona tokony handray anjara amin'io, na hanao fampahafantarana azy, raha tsy izany dia mety handika lalàna izy (na lahy na vavy).
Nampitandrina ihany koa ilay birao fa araka ny didy fanapahana momba ny filaminam-bahoaka, ireo izay mandika lalàna ka manatrika izany dia hiatrika hatramin'ny sazy famonjàna mandritra ny dimy taona na herintaona noho ny fampielezany (fanaovany doka ho) an'ilay fiaretantory.
Tanisain'ilay fanambaràna ihany koa ny Lalàna Fiarovam-Pirenena ao Hong Kong ao anatin'ny lisitr'ireo fandikàndalàna goavana:
Raha misy manandrana mandika ny lalàna, tafiditra amin'izany ny Fandraràna fivorivoriana ataona andian'olona, ny didy fanapahana momba ny filaminam-bahoaka, ny Lalàna Fiarovam-Pirenena ao Hong Kon, sns…, dia ho hentitra tokoa ny fandraisana an-tànan'ny polisy izany, mifanaraka amin'ny lalàna.
Ny 6 May, mpikatroka efatra mpandàla ny demaokrasia, ka isany i Joshua Wong, no nahazo sazy fampidirana am-ponja efatra hatramin'ny folo volana noho izy ireo nanatrika ilay fiaretantory tamin'ny taona lasa tao amin'ny Victoria Park. Mbola misy ampolony mahery ireo mpikatroka mpandàla ny demaokrasia no miandry ny fitsaràna azy ireo noho ny nanatrehany, nanaovany antso na nikarakaràny ilay fiaretantory.
Nanomboka tamin'ny 1990, nikarakara fiaretantory mandrehitra lahinjoro hatrany i Hong Kong ho fahatsiarovana ilay vonomoka tao amin'ny Kianja Tiananmen tamin'ny 1989—mandra-pandràran'ny pôlisy ilay hetsika, voalohany ny tamin'ny taona lasa iny, tamin'ny fanindrahindràna ny resaka “olana ho an'ny fahasalamam-bahoaka”.
Tamin'ity taona ity, nampiasain'ny pôlisy ao Hong Kong ihany koa ny fepetra fandraràna ny fivorivorian'ny olona noho ny fisian'ny valanaretina COVID-19 mba ho entiny manamarina ny fanapahankeviny. Tao anaty taratasy iray nalefa tamin'ny 27 May ho an'ny Hong Kong Alliance ho fanohanana ny Hetsika Fitiavan-tanindrazana ao Shina (HK Alliance) mpikarakara ny hetsika, nilaza ny pôlisy fa mety ho loza mitatao ho an'ny fahasalamam-bahoaka ilay hetsika.
Satria nidina ho tarehimarika iray sisa ny isan'ny tranga isanandro amin'ny COVID-19 ho an'ny volana May, noalefahana ireo fepetra momba ny elanelana sôsialy ary dia hita eny amin'ireo toeram-pivarotana goavana sy ny torapasika ny olona tamin'iny herinandro lasa iny. Izany dia nitarika ny HK Alliance hangataka fanafoanana ilay fanakanan'ny pôlisy saingy tsy nahomby, ary dia natsahatr'ireo mpikarakara ny fampahafantarana rehetra momba ilay fiaretantory:
“Tsy maintsy miala tsiny amin'ny daholobe izahay… tsy afaka intsony ny HK Alliance hanao, mifanaraka amin'ny lalàna, an'ilay fiaretantory andrehetana lahinjiro amin'ity taona ity. Ho atsahatray ny fampahafantarana ilay fiaretantory. Amin'izay andro izay, izahay tsy hipoitra na hanatevina laharana amin'ny maha-fikambanan'ireo mpikamban'ny HK Alliance izahay,” hoy i Richard Tsoi. pic.twitter.com/Xp1ZC7CtBi
— Xinqi Su 蘇昕琪 (@XinqiSu) 29 May 2021
Na izany aza, nanambara ihany koa ny HK Alliance :
Tena resy lahatra tanteraka ny Alliance fa tsy hanadino mandrakizay ny 4 Jona ireo vahoaka ao Hong Kong, ary angatahanay ihany koa ny vahoakan'i Hong Kong mba hisaona ny andron'ny 4 Jona ao anatin'ny fahendrena sy faharetana, anaty faritra voafehin'ny lalàna, azo antoka, am-pilaminana ary voalanjalanja, araka ny fomban-dry zareo manokana, amin'ny fotoana sy toerana mahamety azy. Hanjàka anie ny marina!
Tamin'ny taona lasa, an'arivony maro ireo mponin'i Hong Kong no niara-nientana teo noho eo nandrehitra lahinjiro tany amina toerana ampolony natao ho an'ny daholobe, isan'izany ny tao amin'ny Victoria Park, mba ho fahatsiarovana ny Vonomoka tao Tiananmen, na teo aza ny fandraràna avy amin'ny pôlisy.
Efa noheverina mialoha ny hisian'ny hetsika tahaka izany any amin'ireo toerana maro manerana an'i Hong Kong. Nilaza ny Fiangonana Katôlika fa hanohy ny fomba nahazatra azy amin'ny fampiantranoana “Lamesa ho an'ny Maty” rehefa 4 Jona any amin'ny fiangonana fito amin'ireo ananany any Hong Kong.
Mendrika hojerena raha hametraka taratasy fanenjehana ny famoriam-bahoaka niparitaka tahaka izany ny pôlisy:
…hanao tsindry hanenjehana ireo izay nanao hetsipanoherana tahàka io. FA mety hataon-dry zareo ho heloka bevava ny famarotana lahinjiro (labozia)!! 2/2
— Jerome Cohen 孔傑榮(柯恩) (@jeromeacohen) 29 May 2021
Tamin'ity taona ity, nitranga andro roa taorian'ny an'i Macau ny fandraràn'i Hong Kong an'ilay fiaretantory, ny tao Macau izay nilaza mazava ny resaka fiarovam-pirenena ho anton'ilay fandraràna. Tamin'ny 1999, niverina ho ao anatin'i Shina ilay zanatany pôrtiogey fahiny, eo ambanin'ilay pôlitika “Firenena Tokana Rafitra Roa”, taona roa taorian'i Hong Kong.
Nolazain'ny pôlisin'i Macau tamin'ny mpikarakara ilay hetsika, Firaisan'ny Fampandrosoana Demaokratika ao Macau, fa ireo teny faneva toy ny “atsaharo ny fifehezan'antoko tokana” na “atsaharo ny pôlitikan'ny fanenjehana” dia mety handrisika ho amin'ny fanozongozonana ny rafitra efa misy, ary hanohintohina ny fahatokisan'ny vahoaka an'ireo manampahefana. Tamin'ny taona lasa dia noraràn'ny pôlisin'i Macau ilay fiaretantory, tamin'ny nitanisàny ny olana aterak'ilay valanaretina, ary ny 4 Jona dia pôlisy maherin'ny 100 no nalefany mba hanaparitaka ireo olona nanandrana ny hamelatra sorabaventy na handrehitra lahinjiro teny amin'ireo toerana lehibe natao ho an'ny daholobe.
Làlana mitovy amin'ny tao Macau no arahan'ny “tsipika mena’ ao Hong Kong. Talohan'ny fandraràna ôfisialy, maromaro ireo olombaventy mpomba an'i Beijing ao Hong Kong no nanambara fa tokony raisina ho toy ny tsy ara-dalàna ny HK Allinace, araka ny Lalàna momba ny Fiarovam-Pirenena, satria ny tanjon'ilay fikambanana dia ny hamaranana ny ‘fifehezan'antoko tokana’ ary ilay fiaretantory fanao isantaona rehefa 4 Jona dia mety hanimba ny fahefan'i Beijing.